Ndị Agha Mba Amerịka Egbuola Abu Bakr al-Baghdadi - Igbo News | News in Igbo Language
Oct 28, 2019 - 00:11 Updated: Jan 21, 2021 - 00:08
Nke a mere n’abalị ụnyaa, mgbe ndị agha mba Amerịka wakporo Baghdadi n’ebe o jiri mere ebe nzuzo na mpaghara ugwu mba Sirịa.
Site n’okwu onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuputere n’ụtụtụ ụnyaa, ndị agha mba Amerịka na-achọ ịnwete Baghdadi na ndụ maọbụ n’ọnwụ, kemgbe afọ ole n’ole ahụ ha na-alụ agha megide ndị otu izlamik steeti.
N’ozi o weputere site n’igwe okwu ịhe onyonyo, Trump kọwapụtara otu okwe siri gbaa, yana otu ndị agha Amerịka siri ga ije ahụ, wakpo ogige ebe Baghdadi bi, mezie ịhe Baghdadi jiri nwere aka ya gbuo onwe ya, kama a ga-ejido ya na ndụ.
N’izu ụka gara aga, Amerịka matara ebe Baghdadi zoro na Sirịa site n'ọnụ Mohammed Ali Sajet, otu n’ime ndị na-eso ụzọ Baghdadi, bụ onye e jidere na mba Ịrak n’ọnwa gara aga.
Ndị agha Amerịka mechara buru ọgụ jekwuru Baghdadi n’ebe ahụ o jiri mere ebe nzuzo. Ha na ndị otu Baghdadi kwarịtara mgbọ.
Baghdadi mechara kpasuo mgbọ ogbunigwe o jiri soo onwe ya. O gburu onwe ya ma gbukwe ụmụ ya ndị ya na ha nọ tupu ọgụ ahụ amalite.
Mgbe Baghdadi gbuchare onwe ya, ndị Amerịka mechera nwere ogbunigwe gbarie ụlọ ebe ịhe ahụ mere.